नेपाल आज | सामान्य झैँ लाग्ने यी समस्याहरु भिटामिन डि को कमि हुदा देखिने लक्षणहरु हुन् , सजक रहनुहोस र जान्नुहोस भिटामिन डि को कमि पुरा गर्ने उपायहरु !
सामान्य झैँ लाग्ने यी समस्याहरु भिटामिन डि को कमि हुदा देखिने लक्षणहरु हुन् , सजक रहनुहोस र जान्नुहोस भिटामिन डि को कमि पुरा गर्ने उपायहरु !
भिटामिन 'डि' ले हड्डी मजबुत बनाउने मात्र नभई शरीरमा क्याल्सियमको अवशोषण गर्नमा पनि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। अनावश्यक थकान महसुस हुनु , मानसिक चिन्ता बढ्नु , अत्याधिक निन्द्रा लाग्नु आदि भिटामिन 'डि' को कमिबाट देखिने लक्षणहरु हुन्। भिटामिन डि को कमि हुदा अन्य के के लक्षणहरु देखिन्छन त आउनुहोस
शिशुहरुमा भिटामिन डि को कमि भएको पहिचान गर्न कठिन हुन्छ तर बयश्कहरुमा भने अनावश्यक पसिना आउनु भिटामिन डि को कमि हुदा देखिने लक्षण हो। यदि जुनसुकै समयमा पनि पसिना आउछ भने तुरुन्तै डाक्टरको उचित सल्लाह र परामर्श लिनु आवश्यक छ।
पटक पटक निन्द्रा लाग्नु
पर्याप्त निन्द्रा लिए पनि पटक पटक निन्द्रा लाग्नु संगै शारीरिक थकान महसुस हुनु भनेको भिटामिन डि को कमीका संकेतहरु हुन।
भिटामिन डि को कमीले गर्दा चिन्ता र डिप्रेसन बढ्ने अध्ययनले जनाएको छ। त्यस्तै एक अध्यनका अनुसार भिटामिन डि ले ब्रेनको त्यस क्षेत्रमा काम गर्छ जसले सिराटोनिन र डोपेमाइन मूडमा गम्भीर असर पार्छ ।
बिना परिश्रम यदि जोर्नी दुख्ने समस्या छ भने भिटामिन डि को कमि भएको हुन सक्छ त्यसैले यदि यस्तो लगातार एक हप्तासम्म भएको अवस्थामा तुरुन्तै डाक्टरको उचित परामर्श लिनु आवश्यक छ।
सानातिना चोटपटकका कारण हड्डी फ्याक्चर हुन्छ भने यो ऑस्टियोपोरोसिसको संकेत हुन सक्छ । अमेरिकन जर्नल अफ क्लीनिकल न्यूट्रीशनले गरेको एक अध्ययनका अनुसार हड्डी कम्जोर भएका तथा रिकेट्सका बिरामीहरुमा भिटामिन डि को कमि भएको पाईएको छ।
भिटामिन डि प्राप्त हुने स्रोतहरु
-बिहान करिब ७ बजेदेखि ९ बजेसम्मको घामको किरणमा भिटामिन डी पाइन्छ।
-नियमित अन्डा खाने
-डेरी प्रोडक्ट्सहरु जस्तै दहि दुधको प्रसस्त सेवन गर्ने
-गाजर पनि भिटामिन डि को प्रमुख स्रोत हो।
-च्याउमा पनि भिटामिन डि प्रसस्त पाईन्छ।
यसरी माथि उल्लिखीत् यस्ता समस्याहरु भिटामिन डि को कमि हुदा देखिने लक्षणहरु हुन त्यसैले यस्ता समस्याका देखिएको खण्डमा तुरुन्तै चिकित्सकको उचित परामर्श लिनु आवश्यक छ।